हातखु’ट्टा घिसार्दै जीन्दगी लतार्ने शारदाको संघर्ष – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ? – Sudur Samaj
हातखु’ट्टा घिसार्दै जीन्दगी लतार्ने शारदाको संघर्ष – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला ?
आज भन्दा ८ बर्ष अगाडि ! तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रुकुमको प्राङ्गणमा केटीहरुको भिडभाडको बिचमा देखिएको एउटा विचित्रको दृश्यले मेरो ध्यान तान्यो । दुबै हात जमिनमा टेकेर पुरै शरीर लतार्दै, घिर्सिदै हिड्ने मानिसको त्यो अवस्थाले मेरो मात्र हैन धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो । असह्य शा रिरीक पी डा बोकेर शरीरलाई ढुंगा र माटोमा लतार्ने भविष्यका सूनौला सपना बोकेर जिल्ला सदरमुकाम मुसिकोट आएकी थिईन,उनी अर्थात २७ बर्षीया शारदा शर्मा ।
हात खुट्टा जमिनमा घिसार्दै जिन्दगीमा सरकारी सेवा गर्ने लगायतका अरु थुप्रै जीन्दगीका सपनाहरु लिएर संघर्ष गरिरहेकी उनका लोभलाग्दो रहरहरु सुनाईन । कति हो कति पीडा मनमा थिए होलान, दुबै खुट्टाले काम गदैनन् । उनि जन्मजात अपांग हुन । तर पनि अदम्य शाहसका साथ उनले गरेका संर्घषहरु कयौँ युवाहरुका लागि प्रेरणादायी थिए । जन्मजात दुवै खुट्टा नचलेपछि शारदालाई हिडन नमिल्दो रहेछ । दुई हातमा चप्पल लगाएर हात खुट्टा टेक्दै दुई दिन लगाएर भविस्यको खोजी गदै कहिले सदरमुकाम र कहिले घर, कहिले गाविस कार्यालय !
लोकसेवाको परीक्षाका लागि कहिले दाङ कहिले काठमाडौ ।